China heck ba kiraro SS06R sy mpanamboatra | Eigday
Akanjo ba mafana
Fonon-tànana fanaovana ski
Ba kiraro nohafanaina
Ba kiraro mafana mafana
Fonon-tànana môtô nafanaina amin'ny batterie Miaraka amin'ny CE S28B
Fonon-tànana miakatra bateria S67B
Ba kiraro nanafana SS06R
Ba kiraro nanafana SS02B
Ba kiraro nanafana SS01G
Rechargeable batterie heated glove Liner manify heater ...
CE fonon-tànana môtô nohavaozina CE miaraka amin'ny Knucle ...
Main Function: MPAMONJY Hba kiraro homana dia hahatonga ny hetsika ivelan'ny toetrandro mangatsiaka ho zaka kokoa sy mahafinaritra. Na mandeha, ski, snowboarding, snowshoe, snowmobiling, fihazana, fanjonoana ranomandry, pataloha, moto, bisikileta, angady, ary izay rehetra manana tongotra mangatsiaka.
Fitaovana: 55% Coolmax + 25% Elastic + 20% Spandex
Loko: Mainty + mena
Heating pad: 7.4V 4W, singa fanamainana fibre mitambatra
Controller: fifehezana mari-pana 3 haavo, avo / salantsalany / ambany (99% -66% -33%), mpampitohy lehilahy 35135DC.
Haavo avo lenta (Mena): ≈65 ℃ 3.5-4 ora;
Haavo antonony (Fotsy): ≈55 ℃ 5.5-6 ora;
Haavo ambany (Manga): ≈40 ℃ 10-11 ora;
Batterie: fonosana bateria lithium polymer 7.4V 2200mAh avo lenta, mpampitohy DC 35135 vehivavy
Charger: 8.4V 1.5A, charger misy loha roa, mpampitohy DC 35135 lahy. US, Europe, UK&AU dia mifidy safidy
Fonosana: boaty fanomezana / boaty fanomezana mazàna (haben'ny boaty: 14.84 x 5.31 x 2.72 santimetatra)
● Paosy 1 ba kiraro nohafanaina
● batterie azo averina 2pcs
● Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa 1pc
● boaty fanomezana tsara tarehy 1pc
Vokatra namboarina MOQ: tsiroaroa 1000
Fonosana namboarina: 1000 pcs
Mitroka, mifoka rivotra, malaina haingana, manify matevina, mampiasa maodely fanamafisam-peo matevina elektronika manify. Ny fantsom-batana nohamafisin'ny tampon-tongotra sy ny rantsan-tongotra sy ny fantsom-panafenana nohafanaina nanampy ny hafanana amin'ny rantsantanana mba hampafana ny tongotrao amin'ny toetr'andro mangatsiaka.
Ireo singa fanamainana fibre mitambatra, azo antoka kokoa ho an'ny tongotrao.
3. Manarona ny faritra rehetra amin'ny rantsan-tongotra, ny instep ary ny tongotra eo aloha ny faritra fanafanana.
4. 7.4V rechargeable A-grade polymer lithium-ion pack, azo antoka sy azo entina, hery matanjaka, ary ny bateria miaraka amin'ny CE / ROHS / FCC / UL mari-pahaizana;
5.Telo-haavon'ny fanaraha-maso ny mari-pana dia afaka manitsy hafanana hafanana isan-karazany arakaraka ny tontolo iainana samihafa. LED mena dia ho an'ny mari-pana avo, fotsy ho an'ny mari-pana antonony, manga ho an'ny hafanana ambany.
Fampiharana: Trano an-trano, ary hetsika ivelan'ny trano: lasy, fihazana, fanjonoana ranomandry, bisikileta, bisikileta, bisikileta, hazakazaka, ski, snowboard ary fanatanjahan-tena any ivelany.
Serivisy avo lenta aorian'ny varotra.
12-volana fanoloana ho an'ny olana mifandraika amin'ny kalitao.
Ny vokatray mafana rehetra dia manana lafatra aorinan'ny fanohanan'ny serivisy fivarotana. Raha manana fanontaniana momba ny kalitao, ny habeny, ny bateria na ny charger ianao, azafady mailaka izahay, vonona izahay hanampy anao manokana.
Teo aloha: Ba kiraro nanafana SS02B
Manaraka: Manga fotsy 5V
Adiresy:3F, Building B8, Park Industrial Industrial Tianrui, Fuyong Town, Distrikan'i Bao'an, Shenzhen, Sina 518103
Telefaona:0086 755 2780 4906